कोभिड–१९ र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना : RajdhaniDaily.com
Home बिचार कोभिड–१९ र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना
कोभिड–१९ ले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको सम्भावना उजगर गरेसँगै पशुपक्षीको विकासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुने मुद्दा पनि चर्चामा आएको छ । विश्व मानव सभ्यताको विकाससँगै पशुपक्षी मानिससँग रहँदै आएका छन् । यसर्थ, यी मानव सभ्यता र विकासका सहयात्री हुन् । पशुपक्षीले मानव सभ्यताको विकाससँगै पत्रवाहकको काम, सुरक्षा प्रदान गर्ने, यातायातको साधन, कृषिका सहयोगी, मासु, दूध र अण्डाजस्ता पौष्टिक आहार प्रदान गरेर मानव जातिलाई गुन लगाएका छन् । नेपालको पनि उत्पत्तिसँग पशुपक्षी साथमै रहेकोमा खासै तर्कवितर्क गरिरहनु परोइन । तथापि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवाको औपचारिक आरम्भ भने १९७८ सालमा कृषि अड्डा खुलेपछि भएको मानिन्छ । यसपछि आधुनिक पशुपक्षीको विकासक्रम आरम्भ भएको हो ।
१९८२ सालमा सिहंदरबार परिसरभित्र कृषि प्रवद्र्धन फार्म खडा गरियो भने १९९४ सालमा कृषिपरिषद् गठन गरियो । यसैगरी, १९९८ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा भेटेरिनरी अस्पताल खुल्यो भने २००० सालमा चित्लाङमा भेडाफार्म स्थापना गरियो । साथै, २००४ सालमा परवानीपुरमा अनुसन्धान फार्म खडा भयो । यसरी राणकालीन जहानियाँ शासनमा पनि पशुपक्षीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।
२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि मुलुकको चौतर्फी विकासको कार्यारम्भ भयो । तदनुरूप २००८ सालमा कृषि विभाग स्थापना गरियो । २०१० सालमा कृषि विभागमा पशु सेक्सन खडा गरियो । जसबाट पशु विकासको महŒवका साथै यसले आर्थिक समृद्धिमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात गरियो । यसैगरी, २०१४ सालमा १० जिल्लामा पशु अस्पताल खडा गरियो । यसै क्रममा २०२३ सालमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग स्थापना भयो । यसरी पहिलोपटक छुट्टै विभाग खडा गरियो । एकपटक छुट्टै मन्त्रालय पनि खडा भएको थियो । बेलाबखतमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री नियुक्ति गरी पशुपक्षीको विकासको जिम्मेवारी दिने गरेको पनि पाइन्छ ।
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय प्रणालीमा आधारित नेपालको संविधान जारी भयो । मुलुकमा संघीयता लागू हुनपूर्व सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय पशु स्वास्थ्य कार्यालय, गाउमा सेवा केन्द्र, विभिन्न स्थानमा प्रयोगशाला र फार्म स्थापना भएका थिए । हाल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पशुपक्षी विकाससम्बन्धीे विविध काम भइरहेको छ । हाल, एक प्रकारले संक्रमणको स्थिति सिर्जना भएको छ । तथापि, मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा महŒवपूर्ण स्थान ओगट्ने पशुपक्षीको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसमा तीनै तहका सरकारले मन, वचन र कर्मले अधिकतम योगदान गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मूल ध्येय पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित, आयमूलक तथा आकर्षक बनाउने नै हुनुपर्छ । यसले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सघाएको छ । गाईभैंसी, चौरी, बाख्रालगायतको पालनबाट हामीलाई दूध प्राप्त भइरहेको छ । हाल नेपालमा बर्सेनि २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यसलाई वृद्धि गरी पाउडर दूध कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । दूधबाट बन्ने घिउलगायत मिठाईका परिकारमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । साथै, चकलेटलगायतका कारखाना खोल्नुपर्छ । यी सबै पहलबाट हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनेछौं ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा ठूलो टेवा दिने पशुपक्षीको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिकता ल्याउनुपर्छ
हामीले पशुपक्षीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेका छौं । जसले पशुपक्षी, पशुजन्य पदार्थ तथा पशुपक्षी उत्पादन सामग्रीको स्वस्थ्य उत्पादन, बिक्रीवितरण र उपभोगको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हामीले विश्व व्यापार संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार पशुपक्षीको व्यबस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ । पशुपक्षी पालनको कामलाई हल्का ढंगले लिनुहुँदैन । यसमा लापर्बाही गर्दा लाभभन्दा नोक्सानी बढी हुन्छ । पशुपक्षीमा बेलाबखत आइपर्ने संक्रमणको महामारीले ठूलो आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरण गर्नुपरेको छ । यसका लागि किसानलाई तालिम दिनुका साथै यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समावेश गर्नुका साथै विश्व विद्यालयमा यस विधाको छुट्टै विभाग खडा गर्नुपर्छ ।
पशुपक्षीमा लाग्ने रोगहरूको सर्भिलेन्स, अन्वेषण, पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने दह्रो प्रणाली हुनुपर्छ । भेटनरी औषधि तथा जैविक पदार्थ, पशुपक्षी फार्म, ह्याचरी र पशु नश्ल सुधारको काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ । यसमा स्वयं किसान पनि चनाखो हुनुपर्छ । कतै म्याद नाधेको औषधिको बिक्रीवितरण एवं उपयोग भइरहेको छ कि ? कतै पशुपक्षी फार्म र ह्याचरीको सञ्चालनमा तोकिएको मापदण्डको पालना भएको छैन कि ? भनी भेटनरी निरीक्षकले नियमित निरीक्षण गर्नुपर्छ । यस काममा विशेषगरी पालिकाहरू संवेदनशील हुनुपर्छ ।
पशुमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न होस् वा भेडा बाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोग नियन्त्रण गर्न होस्, सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्छ । यसैगरी, सुँगुर, बंगुर र बँदेलमा लाग्ने क्लासिक स्वाइन फिभर (बंगुरको हैजा), गाईभैंसीमा लाग्ने भ्यागुते र चरचरे रोग तथा स्थानीय कुखुरामा फैलिने रानीखेत रोग नियन्त्रणका लागि पनि सम्बन्धित निकाय चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । यस्ता रोगबाट एकातिर पशुपक्षी सखााप हुन्छन् भने अर्कोतिर लगानीकर्ताले पनि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यी रोगको रोकथामका लागि खोप दिने र रोगी वस्तुको उपचार हुने सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्छ ।
मानिसले अत्यन्त खुसीका साथ कुकुर र बिरालो पाल्ने गर्दछन् । तर, यी जनावर बहुलाएर मानिसलाई टोक्दा रेबिज हुने गर्दछ । यसर्थ, रेबिज भ्याक्सिन बैंकको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । साथै, कुकुर बन्ध्याकरणको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकमा बेवासिसे कुकुर र बिरालाले निकै असजिलो पारिरहेका छन् । यसर्थ, यस्ता विषयमा जनचेतना पनि फैलाउनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले दुग्ध पदार्थको उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । जसअनुसार, मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लक्षित एकीकृत दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसैगरी, प्रजनन योग्य राँगा वा साँढे हुर्काउने स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा छन् । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पशुपक्षी राहत तथा पुनस्र्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । सरकारले गोठ सुधार कार्यक्रममा किसानलाई अनुदान दिएको छ ।
व्यावसायिक पशुपक्षी पालनले हामीले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य चुम्न मद्दत गर्नेछ
नेपाल सरकारले घाँसेबालीको व्यावसायिक बीउ उत्पादन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, सरकारले युवा र एकल महिला लक्षित पशुपक्षी पालन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । यस अतिरिक्त, कोरली पाँडी हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । हामीसँग खर्क सुधार कार्यक्रम पनि छ । सरकारले गाईभैंसीलाई सुत्केरी आहार भत्ता अनुदान पनि दिएको छ । यस्मा पालिकाबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै छ । तथापि, पशुपक्षी पालन व्यवसायमा न त आमकिसानको ध्यान गएको छ, न त लगानीकर्ताले अपवादमा केही गाई फार्म, अस्ट्रिच पालनको कार्यबाहेक कुनै मेघा प्रोजेक्ट नै सञ्चालनमा आउन सकेको छ ।
हामीले मुलुकलाई माछा र मासुमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । हाल नेपालमा मासुको वार्षिक उत्पादन ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन छ भने माछाको वार्षिक उत्पादन ९३ हजार मेट्रिक टन छ । हामी मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिकमा छौं भने माछामा हाम्रो वार्षिक खपतको आधा पनि उत्पादन छैन । हामी पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर छौं । क्रमशः माछा र मासु पनि छोटो अवधिमा आत्मनिर्भर हुने तत्कालीन कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । तराईका फाँटमा ठूलाठूला माछापोखरीको निर्माण गर्नुपर्छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रको चिसो पानीमा ट्राउट माछाको फार्मिंङ गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराईका निश्चित क्षेत्रलाई चरन क्षेत्र घोषणा गरी व्यापक रूपमा मासुजन्य वस्तुको फार्म सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले बेलाबखतमा वर्ड प्mलुको क्षतिपूर्ति दिएको छ । यसैगरी, सबै पशुधनमा क्षतिपूर्ति दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । साथै, हामीले पशुको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा नश्ल सुधार भएका गाइको अंश केवल १२ प्रतिशत मात्रै छ भने भैंसीको अंश २८ प्रतिशत छ । हामीले पशुपालनको विकासका लागि घास खेती प्रवद्र्धन गर्ने र वैकल्पिक पशु आहारको उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, हिउँदमा पशु आहार कम हुने गर्दछ । जसको कारण पशु कुपोषणको समस्या देखिन्छ ।
हामीले पशु कल्याण प्रवद्र्धनका केही सीमित काम गरेका छौं । यस अलावा हामीले पशु अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ । तिनलाई कुटपिट गर्ने वा तौल बढाउन अखाद्य वस्तु खान दिने वा पासविक ढंगले ओसारपसार गर्नेलाई कडा दण्ड गर्नुपर्छ । यस्ता हर्कत गर्ने उपर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हामीले भेंडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाट पनि लाभ लिनुपर्छ । मुख्य कुरो, लाइभस्टक गुणस्तर व्यवस्थापनमा आमकिसानलाई अनिवार्य रूपमा तालिम दिनुपर्छ । हामीले मिल्किङ पार्लर स्थापना गर्नुका उपलब्ध सबै विकल्पको उपयोग गरी मिल्क होली डे हुन नदिने तथा बिक्री नभएर किसानले दूध फुक्नुपर्नेजस्ता अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नुपर्छ । अर्को कुरा, पशुपक्षीको कारोबारमा पनि बिचौलियाबाट किसान लुटिएका छन् ।
पशुपक्षी पालनले हामीलाई दूध, अण्डा, मासु, कम्पोस्ट मल मात्रै दिएको छैन । यिनको छाला, रौंलगायतको पनि उच्च मूल्य प्राप्त भइरहेको छ । पशुपक्षी पालनले मानिसलाई एकलकाटे हुनबाट जोगाउँछ । घोडा र खच्चडले हामीलाई यातायातको साधनका रूपमा सघाइरहेका छन् भने राँगा र गोरुले हलो जोत्ने तथा बयलगाढा चलाउने कामका सघाएका छन् । कुकुर हाम्रो सुरक्षामा खटिएका छ भने बाख्राका पाठपाठीले हाम्रो घरआँगनमा नयाँ रौनक थपेका छन् । जसका कारण हामीले पशुपक्षीको आवश्यक सम्मान गर्नुपर्छ । गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो । डाँफे हाम्रो राष्ट्रिय पक्षी हो । हामीले विभिन्न चाडपर्वमा पनि पशुपक्षीको पूजा गर्ने गरेका छौं । यसरी मानव सभ्यताको विकाससँगै पशुपक्षीको विकासमा पनि हामी सधैं क्रियाशील हुनुपर्छ । व्यावसायिक पशुपक्षीपालनले हामीले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा हामीलाई पु-याउन मद्दत गर्नेछ ।
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - December 17, 2020 0
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - January 16, 2021 0
Editor-Picks Kumar Raut - January 18, 2021 0
उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता तालिम दिइने
अर्थ Kumar Raut - August 21, 2020 0
काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघले उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता तालिम दिने भएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनएनबी बैंकको सहयोगमा महासंघले...
धनुषाका २ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - May 25, 2020 0
जनकपुरधाम । धनुषामा फेला परेका कोरोना संक्रमित मध्ये २ जना नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहेका छन् । ती प्रहरीहरू नगराईन नगरपालिकाको गंगुलीस्थित क्वारेन्टाइनमा नै ड्युटी...
प्रदेश सुजीतकुमार झा - May 5, 2021 0
कला Dhruba Lamsal - September 20, 2020 0